I-Nicotinamide emanzini amakhulu e-monotucleotide powder (1094-61-7) Abakhiqizi
Ividiyo enamandla e-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) (i-1094-61-7) ividiyo
Raw Nicotinamide Mononucleotide powder ( "NMN" futhi "β-NMN") iyinhlangano nucleotide ethathwe ribose futhi nicotinamide. Thanda riboside nicotinamide, NMN kuyinto esuselwe niacin, futhi abantu enzyme ukuthi angasebenzisa NMN ukukhiqiza nicotinamide adenine ihambisane dinucleotide (NADH).
I-NMN Ikhuthaza Amandla Okusebenzisa I-Metabolism - I-NAD + isiza ukudiliza ukudla okunjenge-ushukela emandleni.
Ukulungisa i-DNA yokuguga-i-NAD + isetshenziselwa ukulungisa izimpande ze-DNA eziphukile.
I-SIRTUIN Umgqugquzeli - i-NAD + iyadingeka ukuze izakhi zethu zofuzo zesikhathi eside zisebenze.
Ngenkathi i-Nicotinamide mononucleotide (NMN) i-powder iyinzuzo engcono kakhulu futhi ucwaningo luqhubeka, izifundo eziqhutshwa kuze kube manje zibonise ukuthi ziphephile kakhulu futhi aziyona into enobuthi.